अस्पतालमा उपचाररत मोडेल निशा घिमिरेको मृत्यु को हल्ला कस्ले गर्यो ? के हो वास्तविकता ? – Classic Khabar
August 28, 2021 195
नायिका तथा कलाकार निशा घिमिरे ( nisha ghimire ) हाल नर्भिक अस्पतालमा उपचाररत छिन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था पहिले भन्दा केही सुधारोन्मुख छ । उनको उपचारको लागि भनेर देश विदेशबाट विभिन्न कलाकार एवं सामाजिक अभियन्ता हरूले सहयोग जुटाइरहनुभएको छ।
अस्पतालमा डाक्टर एवं नर्सहरू उनको उपचारका लागि खटिरहनुभएको छ। अस्पताल स्वयंले निशुल्क उपचार गर्ने बचन दिएर निरन्तर विशेष कक्षमा उपचार भइरहेको छ ।
तर केही टिकटक प्रयोगकर्ताहरूले निशा घिमिरेको मृत्यु, हार्दिक श्रद्धाञ्जली, रिप भनेर पोस्ट गरिदिँदा उनको परीवार एवं आफन्तहरू यतिबेला पीडामा हुनुहुन्छ।
उहाँले यो विषयलाई लिएर कानूनी कार्वाहीको लागि प्रहरीमा गएर उजुरी समेत दिने तयारी गरेको बताएका छन्। उनले आफ्नो मोबाइल खोलेर हेर्दा आफ्नी छोरीको मृत्युको खबर एक्कासि फैलिएको पाउँदा आफूलाई सारै दुख लागेको र विभिन्न आफन्त, मिडियाकर्मी, कलाकारहरूको समेत फोन आइरहेको बताउनुभएको छ।
जिन्दगीमा घरीघरी चोट लाग्दा खेरी एकान्तमा रुन्छु एक्लै मनको ऐना हेरी यति राम्रो अभिनय गरेर सबैको मन जितेकी निशा घिमिरे आज हस्पिटलको बेडमा मृत्युसँग लडिरहेकी छिन् यतिबेला ।
Prevसर्पले टोकेर श्रीमतीको मृत्यु भयो भनेका श्रीमानको पोल जब डमी टेस्ट गरियो त्यसपछि खुल्यो सबै रहस्य !
Next….त्यसपछि छिमेकीहरु पुगेर हेर्दा उनको मृत्यु भैसकेको थियो !